Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 24
Toa tsy azo heverina loatra fa ny hevitra roa mifanohitra no mety ho marina momba ny fahamarinana. Nahoana no misy hevitra maro momba ny olana na zavatra sasany? Ahoana ary no hahaizantsika mamantatra hoe inona marina ny hevitra ary inona no marina?
Ny Fahamarinana diso iray dia tsy azo porofoina na aseho ao an-tsain'ny olombelona, ​​ary tsy takatry ny sain'olombelona ny porofo na fampisehoana toy izany raha azo atao ny manome, na ny lalàna, ny fandaminana ary ny asan'ny tontolo iray aza dia azo porofoina fa lasa ny tantely, na noho ny tsika dia afaka mahatakatra ny fananganana sy ny fanaovan-tsofina iray. Saingy na dia tsy takatry ny sain'olombelona aza ny Fahamarinana tokana ao anaty abstract, azo atao ny mahatakatra zavatra iray momba ny fahamarinana momba ny zavatra na olana rehetra eo amin'izao rehetra izao. Ny fahamarinana dia zavatra iray ihany. Azo atao ho an'ny sain'olombelona ny nampiofanina sy handrosoana ka mety mahalala zavatra hafa nisy an'izany. Misy dingana na ambaratonga telo izay tsy maintsy andalovan'ny sain'olombelona, ​​alohan'ny ahafantarany azy na inona na inona izany. Ny fanjakana voalohany dia ny tsy fahalalana, na haizina; ny faharoa dia hevitra na finoana; ny fahatelo dia fahalalana, na fahamarinana iray avy.
Ny tsy fahalalàna dia toetran'ny haizina ara-tsaina izay mety hahatsapa ny saina ny zavatra iray, saingy toa tsy afaka ny hahatakatra izany. Rehefa amin'ny tsy fahalalana dia nivezivezy ny saina ary voafehy amin'ny eritreritra. Ny saina dia toy ny rahona, loko ary mampifangaro ny saina fa ny saina tsy mahavita manavaka ny rahona tsy fahalalana ary ny zavatra misy. Mijanona ho tsy mahalala ny saina raha fehezina, tarihiny ary tarihin'ny saina. Mba hialana amin'ny haizin'ny tsy fahalalana, ny saina dia tsy maintsy miahy ny tenany amin'ny fahatakarana ny zavatra manavaka amin'ny fahatsapana zavatra. Rehefa miezaka ny saina hahatakatra zavatra iray, tsy dia niavaka tamin'ny fahatsapana izany zavatra izany dia tsy maintsy mieritreritra izany. Ny fisaintsainana dia mahatonga ny saina ho lany tsy ho eo amin'ny toeran'ny tsy fahalalàna maizina mankany amin'ny toeran'ny fiheverana. Ny toeran'ny fiheverana fa ny saina no mahatsapa ny zavatra iray ary miezaka hahalala hoe inona izany. Rehefa miahiahy na inona na inona ny olana ny saina dia manomboka misaraka amin'ny maha-mpikirakira azy ny zavatra mahakasika azy. Avy eo dia manomboka manana ny heviny momba ny zavatra rehetra. Ireo hevitra ireo dia tsy niraharaha izany raha toa ka afa-po amin'ny tsy fahalalany, izay mihoatra noho ny saina tsy misaina na mihevi-tena ho sosotra loatra amin'ny heviny momba ireo zavatra izay tsy mihatra amin'ny fahatsapana. Saingy manana eritreritra momba ny zavatra tsy mampino izy ireo. Ny fiheverana dia ny toe-javatra izay tsy ahitan'ny saina mazava ny marina, na ny toe-javatra misy azy, izay miavaka amin'ny eritreritra, na zavatra izay toa azy. Ny hevitry ny iray no mahatonga ny finoany. Ny finoany dia ny vokatry ny heviny. Ny fitsarana ny tontolo antonony manelanelana ny haizina sy ny hazavana. Izy no izao tontolo izao izay ahitan'ny maso sy ny zavatra manova ny maso sy ny aloka ary ny fandinihana ireo zavatra ireo. Amin'izao toe-tsaina izao, ny saina dia tsy afaka manavaka ny aloka ao amin'ilay zavatra manala azy ary tsy ahitany ny mazava ho miavaka amin'ny aloka na zavatra. Mba hialana amin'ny toeran'ny lainga dia tsy maintsy miezaka ny saina hahatakatra ny fahasamihafana eo amin'ny hazavana, ny zavatra ary ny taratra na ny alokaloka. Rehefa manandrana ny saina dia manomboka manavaka ny hevitra marina sy ny hevitra tsy mety. Ny fiheverana tsara dia ny fahaizan'ny saina manapa-kevitra ny tsy fitovizan'ny zava-misy sy ny fandinihany ary ny alokaloka, na hoe mahita ilay zavatra misy azy. Ny fiheverana diso dia diso ny fandinihana na ny aloky ny zavatra iray. Raha ny toeran'ny hevitra dia tsy hitan'ny saina ny mazava fa miavaka amin'ny hevitra tsara sy diso, na ireo zavatra tsy mitovy amin'ny fisaintsainany sy ny alokalony. Mba hananana eritreritra tsara, dia tsy maintsy manafaka ny saina amin'ny fitsarana an-tendrony sy ny fitarihan'ny eritreritra. Ny loko sy ny saina dia manintona ny saina amin'ny famoronana fitsarana an-tendrony, ary raha tsy misy fanavakavahana izany. Ny fisainana sy ny fanazaran-tena hieritreritra dia ilaina mba hamoronana hevitra tsara. Rehefa namorona eritreritra tsara ny saina ary mandà tsy hamela ny eritreritra hampihetsika na hanavakavaka ny saina manohitra ny hevitra marina, ary mitazona izany hevitra tsara izany, na inona na inona manohitra ny toeran'ny olona na ny tombontsoan'ny olona na ny sakaizany. mifikitra amin'ny hevitra tsara alohan'ny sy ho tian'ny olona rehetra, dia ny saina no handehanana amin'ny fotoana ahazoana fahalalana. Ny saina avy eo dia tsy hanana eritreritra momba ny zavatra iray ary tsy sahiran-tsaina amin'ny mifanipaka amin'ny hevitra hafa, fa ho fantatry ny hoe ilay zavatra teo ihany. Ny iray dia mivoaka avy amin'ny toeran'ny hevitra na ny finoana, ary ao anatin'ny fahazoana fahalalana na fahazavana, amin'ny fitazonana izay fantany fa marina kokoa noho ny hafa rehetra.
Ny saina mianatra ny hahafantatra ny fahamarinan'ny zavatra rehetra amin'ny momba an'io zavatra io. Ao anatin'ny fanjakan'ny fahalalana, rehefa avy nianatra nieritreritra ary afaka nahatratra ny hevitra mety tamin'ny alàlan'ny fahalalahana avy amin'ny fitsarana an-tendrony sy ny fisainana mitohy, ny saina dia mahita izay zavatra rehetra misy ary fantany fa avy amin'ny alàlan'ny jiro izany. izay fahazavan 'ny fahalalana. Raha teo amin'ny tsy fahalalany dia tsy azo heverina, ary raha teo amin'ny toeran'ny hevitra dia tsy nahita ny mazava akory izany, fa ankehitriny kosa amin'ny fanjakan'ny fahalalana dia mahita ny mazava, izay manavaka amin'ny zavatra iray sy ny taratry azy sy ny alokaloka. . Io fahazavana fahalalana io dia midika fa ny fahamarinan'ny zavatra iray fantatra, fa na inona na inona ho fantatra fa misy ary tsy misy tahaka ny hoe alehan'ny tsy fahalalàna na fifangaroan'ny hevitra. Io fahazavana avy amin'ny fahalalana marina dia tsy ho diso fanantenana amin'ny jiro hafa na hazavana izay fantatry ny saina amin'ny tsy fahalalana na hevitra. Ny fahazavan'ny fahalalana dia porofo tsy azo resahina. Rehefa hita izany, dia noho ny fahalalana ny fahitana, toy ny hoe rehefa misy olona mahalala zavatra iray dia tsy mandalo intsony ny fizotran'ny fanjohian-kevitra momba ny zavatra izay efa nosaininy ary fantany ankehitriny.
Raha misy olona miditra amin'ny efitrano maizimaizina, dia mahatsapa ny lalany ao amin'ny efitrano izy ary mety tafintohina amin'ny zavatra ao anatiny, ary mikapoka ny tenany amin'ny fanaka sy ny rindrina, na mifandona amin'ny hafa izay tsy mihetsika toy ny tenany ao amin'ny efitrano. Izany no toe-javatra tsy fahalalàna izay iainan'ny tsy mahalala. Rehefa avy nifindra manodidina ny efitrano izy dia nanjary efa zatra ny maizina, ary tamin'ny fanandramana dia azony atao ny manavaka ny fivoaran'ny zavatra ary ny olona mihetsika ao anaty efitrano. Tahaka ny fandalovan'ny tsy fahalalàna ho any amin'ny toeran'ny hevitra izay ahafahan'ny olombelona manavaka zavatra iray tena maivana amin'ny zavatra iray hafa ary mahatakatra ny fomba tsy hifandonan'ny tarehim-piainana hafa. Andeha hataontsika fa ny iray amin'izao fanjakana izao dia manadino ny tenany amin'izao tontolo izao ankehitriny ary manafina ny maha-izy azy, ary andao hataontsika fa esenany izao ny jiro ary mandrehitra azy manodidina ny efitrano izy. Amin'ny alàlan'ny fandinihana azy manodidina ny efitrano dia misavoritaka izy fa tsy izy irery ihany fa mampikorontana sy manelingelina ny endrika hafa mihetsika ao anaty efitrano. Izany dia toa ilay lehilahy miezaka ny hahita ireo zavatra ireo satria manavaka azy ireo raha ny nisehoany taminy. Rehefa mandrehatra ny fahazavana izy dia toa tsy mitovy noho izy ireo ny tarehin-javatra ary manjavozavo ny hazavana na mampifangaro ny fahitany, satria ny fahitan'ny olona dia misafotofoto amin'ny hevitra mifanipaka amin'ny tenany sy ny hafa. Saingy rehefa mandinika tsara ilay zavatra iankinan'ny jirony izy ary tsy manelingelina na mampifangaro ny jiron'ny tarehimarika hafa izay mety tselatra ankehitriny, dia mianatra mahita izay zavatra misy azy izy ary mianatra amin'ny alàlan'ny fanohizantsika mandinika ireo zavatra ireo. ny fomba hahitana zavatra hafa ao anaty efitrano. Andao hodinihintsika izao fa hainy ny mandinika ireo zavatra sy ny drafitry ny efitrano hahitana ny fisokafan'ny efitrano izay nikatona. Amin'ny ezaka mitohy dia afaka manaisotra izay misakana ny fisokafana izy ary rehefa manao ny tselatra ny rano ao anaty efitrano ary aharihary ny zavatra rehetra. Raha tsy jamban'ny aloky ny hazavana mamirapiratra izy ary tsy manakatona ny fisokafana indray satria ny hazavana izay mameno ary miharihary ny masony, tsy zatra ny hazavana dia hahita tsikelikely ny zavatra rehetra ao anaty efitrano izy raha tsy miadana ny fizotrany. isaky ny misaraka amin'ny hazavana fikarohana azy ireo. Ny hazavana izay manafatra ny efitrano dia toy ny fahazavan-tsaina. Ny fahazavan 'ny fahalalana dia mampahafantatra ny zava-drehetra araka ny maha-izy azy ary avy amin'izany fahazavana izany no ahafantarana ny zavatra tsirairay.